Iswiidhen oo laga ururinayo deeq gurmad ah oo lagu kaalmeynayo Filibbiin - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Iswiidhen oo laga ururinayo deeq gurmad ah oo lagu kaalmeynayo Filibbiin
La daabacay tisdag 12 november 2013 kl 09.40
Ururo badan oo samafal ayaa ilaa hadda soo ururiyey lacag gaareysa siddeed milyan oo karoon oo loogu talagalay dadka ay Filibbiin dufaanuhu ku asiibeen.
Waxyaalaha aadka loogu baahan yahay markii ay dhacdo musiibo noocaan oo kale ahi waxaa ka mid ah biyo la cabbo, cunto iyo in fursad loo helo musqulo iyo daryeel caafimaad, ayey sheegay Anna Sjöblom oo ka socota ururka Dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn.
Per Westberg oo ah ku xigenka xoghayaha guud ee hay’adda ayaa sheegay in ay carruurtu yihiin kuwa ku sugnaan kara khatarta ugu weyn, sidaas awgeed loo baahan yahay in la goobo ay ku badbaadaan oo ku ammaan helaan.
Weli waxaa jira magaalooyin badan oo aan xiriir lala yeelan karin, waxaana la la’ yahay labaatameeyo qof oo iswiidhish ah oo aan weli warkooda la hayn, sida laga soo xigtay wasaaradda arrimaha Dibedda.
Dad badan oo ka soo jeeda dalka Filibbiin oo ku nool Iswiidhen ayaa ka welwelsan ehelahooda halkaas ku sugan dhulka duufanuhu ku dhufteen oo waxyeelooyinka ballaarani soo gaareen.